Ikpe nke West - Okwu Ugbu a
Ikpe nke West
Ihe na March 3, 2022 March 3, 2022 by Mark
WE ezipụla ọtụtụ ozi amụma n'izu gara aga, ma ugbu a ma site n'iri afọ gara aga, na Russia na ọrụ ha n'oge ndị a. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụghị naanị ndị ọhụ ụzọ kama olu nke Magisterium ka dọrọ aka ná ntị n'ụzọ amụma banyere oge awa nke ugbu a…
Onye amụma Pope
N'ịdabere na onyonyo doro anya nke ọhụụ Fatima,Olu Fatima, na Nnukwu jijiji Kadịnal Joseph Ratzinger (Benedict XVI) dere:
Mmụọ ozi ahụ ji mma agha na-enwu ọkụ n’aka ekpe nke Nne nke Chukwu na-echeta ihe oyiyi ndị yiri ya n’Akwụkwọ Mkpughe. Nke a na-anọchite egwu nke ikpe nke na-abịakwasị ụwa. Taa olile-anya na ụwa nwere ike ịbụ ntụ site n'oké osimiri ọkụ adịkwaghị ezigbo nrọ efu: mmadụ n'onwe ya, na ihe ọ rụpụtara, agbanweela mma agha na-enwu ọkụ. -Ozi nke Fatima, ebelebe.tv
Lee, ekewo m ọkpụ-igwe nke na-afụ icheku icheku ọkụ ma na-akpụ ngwa ọgụ dịka ọrụ ya; obu mu onwem kerewo onye mbibi imebi ihe. (Aịsaịa 54:16)
Mgbe ọ ghọrọ Pope, Benedict XVI kwughachiri ịdọ aka ná ntị a ọzọ nye Nzukọ-nsọ, karịsịa n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, ebe nmebipụ nke Kraịst na-apụta ngwa ngwa site na Europe ruo North America:
Egwu nke ikpe metụtakwara anyị, Churchka na Europe, Yurop na ndị ọdịda anyanwụ n'ozuzu ha… Onyenwe anyị na-etikwa anyị ntị… "Ọ bụrụ na i chegharịghị, m ga-abịakwute gị ma wepụ ihe ndọba oriọna gị n'ọnọdụ ya." Enwekwara ike ịnara anyị ìhè ma anyị ga-eme nke ọma ikwe ịdọ aka na ntị nke a na oke mkpa ya n'ime obi anyị, ebe anyị na-arịọ Onye-nwe: "Nyere anyị aka ka anyị chegharịa!" —POPE BENEDICT XVI, Mmeghe, Synod nke ndị Bishọp, October 2, 2005, Rome
Ọtụtụ e kwuru site ndị amụma na-adịbeghị anya ozi banyere Italy na kpọmkwem Rome, na otú nke a esemokwu na Russia na-emeghe ụzọ àmà na-egosi. ịmaatụ. Agha Ga-eru Rom Nna Ụka ​​Lactantius dere otu oge:
… mgbe isi obodo nke ụwa ga-ada, wee malite ịbụ okporo ámá… onye nwere ike inwe obi abụọ na ọgwụgwụ ugbu a erutela n'ihe gbasara mmadụ na ụwa niile? -Lactantius, Nna Chọọchị, Instlọ Akwụkwọ Chineke, Akwụkwọ VII, Ch. 25, "Nke Oge Ikpeazụ, na nke Obodo Rome." N'ebe a, a na-ewere Rome dị ka isi obodo ime mmụọ nke ụwa n'oge Ndị Kraịst. Rịba ama: Lactantius gara n'ihu na-ekwu na ọdịda nke Alaeze Ukwu Rom abụghị njedebe nke ụwa, kama na-egosi mmalite nke ọchịchị "puku afọ" nke Kraịst n'ime Nzukọ Ya, na-esote mmezu nke ihe nile. “Otu puku afọ” a bụ ọnụọgụ ihe atụ na ihe anyị na-ezo aka ebe a dị ka “Oge Udo. Lee Otu esi furu oge ahụ.
St. Paul kwuru banyere “onye mgbochi”Na-egbochi“ onye ahụ na-emebi iwu ”nke nnupụisi na-ebute ụzọ ma ọ bụ mgbanwe. Nyere na Alaeze Ukwu Rom ghọrọ Onye Kraịst, taa, mmadụ nwere ike ịtụle mmepeanya ọdịda anyanwụ dịka ngwakọta nke mgbọrọgwụ Ndị Kraịst / nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị.Olu Ndị Agitators - Nkebi nke II N'otu aka ahụ, ndapụ ya site n'Oziọma ahụ na ọdịda nke Krisendọm nwere ike ịbụ onye na-agba akaebe St. Paul na-ekwu maka ya:
Nnupụisi a (ndapụ n'ezi ofufe), ma ọ bụ ịda ada, ka ndị nna ochie na-aghọta, nke nnupụisi site na alaeze Rom, nke ebibiri mbụ, tupu ọbịbịa nke emegide Kraịst. O nwere ike ịbụ na a ga-aghota kwa nnupụisi nke ọtụtụ mba sitere na Catholicka Katọlik nke mere, n'otu akụkụ, mere ugbua, site n'aka Mahomet, Luther, wdg. nke onye na-emegide Kraịst. —Fa asɛm a ɛwɔ 2 Tes 2: 3, Douay-Rheims Bible Nsọ, Baronius Press Limited, 2003; peeji nke. Ogbe 235
The Katkizim nke Churc Katolikh na-akụzi:
Ndapụ n'ezi ofufe bu mkpochapu nke okwukwe ndi Kraist… Nkpagbu nke okpukpe kachasi elu bu nke onye na-emegide Kraist, nke a na-eme nke oma-nke mmadu na-enye onwe ya otuto n’onodu nke Chineke na Mezaia ya bu onye biara n’anu aru. Aghugho nke onye ah na-emegide Kraist amaliteworị ịmalite n'uwa n'oge ọ bụla a na-ekwu na a na-eme ka ọ ghọta n'ime akụkọ ihe mere eme na olile anya nke Mezaịa nke enwere ike imezu karịa akụkọ ihe mere eme site na ikpe eschatological. Churchka ajụla ụdị ụdị arụrụala a nke ọchịchị alaeze ga-abịa n’aha millenarianism, ọkachasị ụdị ndọrọ ndọrọ ọchịchị “rụrụ arụ” nke messianism nke ụwa. -CCC, n. 2089, 675-676
Onye nkuzi Katọlik Canada, onye ode akwụkwọ, na prọfesọ, Michael D. O'Brien, onye m chere na ọ bụ olu amụma kachasị ama na Ụka ​​gbasara ọdịda ọdịda anyanwụ - kwubiri:
N'ileghachi anya na ụwa nke oge a, ọbụnadị ụwa anyị "onye kwuo uche", anyị enweghị ike ịsị na anyị na-ebi n'ime mmụọ nke mmụọ a nke messianism ụwa? Na mmụọ a egosighi karịsịa n'ụdị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya, nke Catechism kpọrọ n'asụsụ siri ike, "rụrụ arụ na-apụ apụ"? Mmadụ ole n’oge anyị kwenyere ugbu a na mmeri nke ihe ọma n’elu ihe ọjọọ n’ụwa ga-enweta site na mgbanwe mmekọrịta ọha na eze ma ọ bụ mgbanwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya? Mmadu ole adabala na nkwenye na mmadu ga-azoputa onwe ya mgbe etinyere ihe omuma na ume zuru oke banyere onodu mmadu? M ga-atụ aro na nrụrụ a dị egwu na-achị ụwa niile dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ. —Kwuru na basilica St. Patrick na Ottawa, Canada, Septemba 20, 2005; catholiculture.org
… A na-eme okpukpe na-adịghị mma dịka ụkpụrụ nke ọchịchị aka ike nke mmadụ nile ga-agbaso. —POPE BENEDICT XVI, Ìhè nke ,wa, Mkparịta ụka Peter Seewald, p. 52
Ndakpọ omume na mmụọ nke ọdịda anyanwụ
Ụdị dị iche iche nke "okpukpe" nke a na-ewere bụ Okpukpe nke Sayensị - nkwenkwe gabigara ókè na ike nke ihe ọmụma sayensị na usoro.
Ọdịda Anyanwụ na-ajụ ịnara, ọ ga-anabata naanị ihe ọ wuru maka onwe ya. Transhumanism bu avatar kasịnụ nke nmeghari a. N'ihi na obu onyinye nke Chukwu, odidi nke madu n'onwe ya ghoro nwoke nke odida anyanwu ihe. Nnupụisi a sitere na mmụọ. - Cardinal Robert Sarah, Akwụkwọ akụkọ Katọlik, Eprel 5th, 2019; cf. Okwu Afrika Ugbu a
N'ezie, ọ bụ ndị isi ọdịda anyanwụ bụ ndị na-anya ụgbọ ala "Revolution Industrial Revolution nke anọ" na-achọ ijikọ ahụ anyị na mpaghara dijitalụ.
Ọ bụ ngwakọta nke teknụzụ ndị a na mmekọrịta ha n'ofe ngalaba anụ ahụ, dijitalụ na nke ndu nke na-eme ụlọ ọrụ nke anọ mgbanwe fundamentally dị iche na aga revolutions. — Prof. Klaus Schwab, onye nchoputa World Economic Forum, "Mgbanwe ụlọ ọrụ nke anọ", p. 12
Ọganihu na sayensị enyela anyị ike ịchịkwa ikike ndị sitere n'okike, ịchịkwa ihe ndị dị na mbara igwe, imepụta ihe ndị dị ndụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ imepụta ụmụ mmadụ n'onwe ha. N’ọnọdụ a, ikpegara Chineke ekpere ga-egosi na ọ baghị uru, enweghị isi, n’ihi na anyị nwere ike iwulite ma mepụta ihe ọ bụla anyị chọrọ. Anyị amataghị na anyị na-atụkwasị otu ahụmịhe ka Bebel. —POPE BENEDICT XVI, Pentikọst Homily, Mee 27, 2012
Dị ka isi akụkọ na-ejigide esemokwu na Ukraine, Òtù Ahụ Ike Ụwa na ndị mmekọ ya na-eji nwayọọ na-akwadebe maka ọdịda nke akụ na ụba ụwa na ịrị elu nke oge dijitalụ nke a ga-ekenye onye ọ bụla n'ime mmadụ ID dijitalụ. soro "ọkwa ahụike ha" cf. "Na-aga n'ihu na akwụkwọ dijitalụ nke ọkwa COVID-19", onye.int — nke bụ ọnwụ ọnwụ nke nnwere onwe.Olu "WHO ndị mmekọ ya na nnukwu ụlọ ọrụ nkwukọrịta iji wepụta paspọtụ COVID dijitalụ zuru ụwa ọnụ", lifesitenews.com
N'iji ọgbọ anyị atụnyere ọdịda nke Alaeze Ukwu Rom, Benedict XVI na-ese foto a maara nke ọma:
Ikewa nke isi nke iwu na omume oma nke na-akwado ha tiwapuru mgbochi mmiri nke rue oge ahu chebere ibikọ n'udo n'etiti ndi mmadu. Anyanwụ na-ada n’elu ụwa dum. Ọdachi ndị na-emere onwe ha ugboro ugboro mere ka echiche a nke enweghị nchebe ka njọ. Enweghị ike na anya nwere ike ịkwụsị a ọdịda. Mgbe ahụ, ihe siri ike karị bụ arịrịọ nke ike nke Chineke: arịrịọ ka ọ bịa chebe ndị ya pụọ ​​na egwu ndị a niile.... [Taa], Naanị ma ọ bụrụ na enwere nkwenye dị otú ahụ na ihe ndị dị mkpa nwere ike ịbụ iwu na ịrụ ọrụ iwu. Nkwenye a dị mkpa sitere na ihe nketa Ndị Kraịst dị n'ihe ize ndụ… N'eziokwu, nke a na-eme ka mmadụ ghara ịma ihe dị mkpa. Iguzogide echiche chi jiri n'ehihie ma chekwaa ikike ya ịhụ ihe dị mkpa, ịhụ Chineke na mmadụ, maka ịhụ ihe ọma na ihe bụ eziokwu, bụ ihe gbasara mmadụ niile nke ga-ejikọ ndị niile nwere ezi obi. Ọdịnihu nke ụwa nọ n'ihe ize ndụ. —POPE BENEDICT XVI, Okwu Ndị Rom Curia, Disemba 20, 2010, Akwụkwọ akụkọ Katọlik
Ọbụghị naanị na anyị egeghị ntị n’olu Kraịst site n’aka Vicar ya, ma ndị amụma ya erughị eru, mana mba ndị dị n’Ebe Ọdịda Anyanwụ agbaala mbọ ike n’ịgbasa iwu okike na iwepụ ihe mgbochi niile - ọkachasị ndị na-echebe ndị kacha emerụ ahụ (site n’akpa nwa ruo ndị agadi). . N'ihi nke a ka ikpe Chineke ji malite na West.
Nsogbu ime mmụọ metụtara ụwa dum. Ma isi mmalite ya sitere na Europe. Ndị mmadụ na West bụ ikpe nke na-ajụ Chineke ... Ime mmụọ ida si otú nwere nnọọ Western agwa. - Cardinal Robert Sarah, Akwụkwọ akụkọ Katọlik, Eprel 5th, 2019; cf. Okwu Afrika Ugbu a
Ikekwe anyị nwere ike ịghọta nke ọma ugbu a ihe kpatara Nwunye anyị rịọrọ Nzukọ-nsọ ​​ka o doo Russia nsọ nye obi ya na-adịghị ọcha ma na-enye nchegharị nke ofufe Saturday mbụ.Olu Secdị Nsọ nke Russia ọ mere? Udo gaara esi site na ntughari zuru oke nke Russia; ma ugbu a, Russia - kama ịbụ ngwá ọrụ ntụgharị - yiri ka ọ bụ ngwá ọrụ nke ọcha. Ọtụtụ amụma e buru na Rọshịa ga-abata na Rom.Hụ ozi sitere na izu abụọ gara aga gawa Gụkọta na Alaeze ahụ
Gịnị bụ olileanya anyị n'oge awa a ka a na-eji ngwá agha nuklia na bọmbụ na-ada? Ọ bụ ka mba dị iche iche weda onwe ha ala ma kweta na ka ọtụtụ puku afọ nke mmepeanya mmadụ gachara, anyị bụ ndị obi ọjọọ na ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke karịa ọgbọ ọ bụla bu anyị ụzọ. "Ụwa na-ewe iwe nke ukwuu n'ihi na ọ nọ n'ọnọdụ ka njọ karịa n'oge iju mmiri ahụ." -Nwanyị anyị na-agọzi Elena Aiello Na ihe niile anyị na-akpọ "ọganihu" bụ ihe efu na ọbụna na-ebibi ihe na-ekwughị ya na Chineke.Olu Ọganihu Mmadụ na Ọganihu nke Ọchịchị Aka Ike
Ọganihu sayensị kachasị dị ịrịba ama, usoro ọrụ ịtụnanya dị ịtụnanya na uto akụ na ụba kachasị ịtụnanya, belụsọ na ya na ezigbo omume na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ga-emegide mmadụ n'ọdịnihu. —POPE BENEDICT XVI, Okwu FAO na emume ncheta afọ 25 nke ụlọ ọrụ ya, Nọvemba, 16th, 1970, n. 4
Mmadu enweghi udo ruo mgbe o jiri ntukwasi obi chigharia na ebere m. —Jọsọs nke dị na St. Faustina, Ebere Chukwu Site na Obi M, Diary, n. Ogbe 300
Ọ ga-adị ka nanị ụzọ fọdụrụnụ iji mee ka mba dị iche iche maa jijiji pụọ ná nnupụisi ha pụrụ nnọọ ịbụ ihe a na-akpọ Ịdọ aka ná ntị — omume ikpe-azụ nke ebere Chineke tutu mmalite nke ụbọchị nke Onye-nwe.Olu Ọ na-eme; Ihe nkwado maka mmetụta; Akwa ofbọchị Ìhè
Mmebi nke America
Amụma Aịsaịa banyere Kọmunist zuru ụwa ọnụ
Olu Fatima, na Nnukwu jijiji
ịmaatụ. Agha Ga-eru Rom
Olu Ndị Agitators - Nkebi nke II
cf. "Na-aga n'ihu na akwụkwọ dijitalụ nke ọkwa COVID-19", onye.int
Olu "WHO ndị mmekọ ya na nnukwu ụlọ ọrụ nkwukọrịta iji wepụta paspọtụ COVID dijitalụ zuru ụwa ọnụ", lifesitenews.com
Olu Secdị Nsọ nke Russia ọ mere?
Hụ ozi sitere na izu abụọ gara aga gawa Gụkọta na Alaeze ahụ
"Ụwa na-ewe iwe nke ukwuu n'ihi na ọ nọ n'ọnọdụ ka njọ karịa n'oge iju mmiri ahụ." -Nwanyị anyị na-agọzi Elena Aiello
Olu Ọganihu Mmadụ na Ọganihu nke Ọchịchị Aka Ike
Olu Ọ na-eme; Ihe nkwado maka mmetụta; Akwa ofbọchị Ìhè
Ihe na ỤLỌ, AKWUKWO OGUGU na tagged ida, agha, nuklia, mma-agha, Russia, ọkụ, West, Krisendọm, Europe, alaeze, Roman, Putin, america.
← Oge awa Jona
Jụọ, Chọọ, ma Kụọ aka →
15	Facebook ozi
16	n'akpa uwe